ကောင်းကင်ဖြူ: ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း
မင်္ဂလာပါဗျာ … ဒီနေ့ တော့ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း သင့်တယ် ဆိုတာကို ကျနော် သိသလောက်လေး ပြောပြပါမယ် ။
ကားတစ်စီး ရဲ့ မူရင်းဆေးအရောင် တောက်ပမှုဟာ စက်ရုံကနေ ထုတ်လိုက်ပြီး အနည်းဆုံး ၅နှစ် လောက် ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ကားရောင်းတဲ့ ကုမ္မဏီတွေ အနေနဲ. အမျိုးအစားပေါ်မှုတည်ပြီး ၅နှစ်မှ ၁၀နှစ်ထိ အာမခံပေးလေ့ ရှိတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။
ဆေးပြန်မှုတ်ထားတဲ့ ကားဆိုရင်တော့ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးအမျိုးစားနဲ. လုပ်သားကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး အနည်းဆုံး ၁နှစ် မှ ၃နှစ် ထိခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် ။
ကားအသစ်က ၅နှစ်၊ ဆေးပြန်မှုတ်ထားတဲ့ကားက ၁နှစ်ဆိုပေမဲ့ မိမိတို.လက်ထဲရောက်ပြီး အချိန်တိုတွင်းမှာပဲ ကားဆေးအရောင်က တောက်ပမှု မရှိတော့ခြင်း၊ ဆေးပေါက်ခြင်း ၊ ဆေးကွဲခြင်း ၊ ဆေးကွက်ခြင်း စသည် အခြေနေကို ရောက်ရှိလာ တက် ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကားပိုင်ရှင်အနေနှင့် ဆေးအရောင် ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းရာကို မသိရှိခဲ့လို့ ပါ ။
ကားတစ်စီးရဲ. ဆေးအရောင်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျနော်အနေနဲ. အဖြစ်များတဲ့ အဓိက အကြောင်းရာနှစ်မျိုးနဲ. တခြားပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းရာများကို ရှင်းပြသွားပါမယ် ။
၁ ။ ဆပ်ပြာရည်ကြောင့် ပျက်စီးစေခြင်း
ဆပ်ပြာရည်ကြောင့် ဆေးအရောင် ပျက်စီးစေ ခြင်းဟာ ကားတစ်စီး ဆေးရောင် ပျက်ရတဲ့ အကြောင်း ရင်းတွေထဲမှာတော့ အများဆုံး တွေ.ရတဲ့အရာပါ ။ ကားပိုင်ရှင်တိုင်း မိမိကားကို ဆေးအရောင် တောက်ပစေချင်ကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေး ညစ်ပတ်သွားတာနဲ့ရေဆေးတဲ့ဆိုင်ကို သွားတတ်ကြသလို ၊ တချို့ လည်း ကိုယ်တိုင်ဆေးရမှ ကျေနပ်တတ်ကြပါတယ် ။
ကျနော်တို. နိုင်ငံမှာဆိုရင် ကားပိုင်ရှင်တိုင်း ကားရေဆေးတဲ့ ကိစ္စကို ဂရုတစိုက် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ထိုသို့ရေဆေးဒါကိုလဲ ဆပ်ပြာရည်နဲ့ဆေးမှ ပြောင်တယ်လို့အစွဲကို ဖြစ်နေပါပြီ ။
ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဆပ်ပြာရည်ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ဆေးကြပါတယ် ။ ဒါပင်မဲ့ ကားရေဆေးဖို. အတွက် သီးသန့် ထုတ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာရည်ကိုသာ အသုံးပြုကြပါ တယ် ။
သီးသန့် ထုတ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာရည် ဖြစ်စေ ၊ ကျနော် တို့ပြည်တွင်းမှာလို တွေ.ရာဆပ်ပြာမှုန့် ကို အရည်ဖျော်ပြီး သုံးသည်ဖြစ်စေ ဆပ်ပြာရည်ဟာ ကားရဲ့ဆေးရောင်ကို ပျက်စီးစေပါတယ် ။
မိမိတို့ ရဲ့ကားကို ဆပ်ပြာရည်တမျိုး အသုံးပြု ပြီး ဆေးတဲ့ အခါမှာ ဆပ်ပြာရည်ဟာ ကား body ရဲ့ ရေခို နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကျန်ခဲ့စေပါတယ် ။ အဲ့လို ရေခိုတဲ့နေရာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆပ်ပြာရည်ဟာ body viberationကြောင့် ကား bodyရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ရောက်ရှိစေပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ရာသီဥတု အပူရှိန်ကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ အင်ဂျင်အပူရှိန်ကြောင့်ဖြစ်စေ ခြောက်သွားပြီး ကားဆေးအရောင် မှာ အဖြူရောင်အကွက် ဖြစ်သွားစေပါတယ် ။
ဘာကြောင့် အဲ့လို အဖြူရောင်အကွက် ဖြစ်သွားလည်းဆိုရင်တော့ metalic ဆေးအမျိုးစားနှင့် တွဲဖက် အသုံးပြုရတဲ့ clear coat (2K) ကြောင့်ပါ ။
( body မှာ ရှိ တဲ့ ကားဆေး အထပ်လိုက် ပုံ ပါ )
clear coat (2K)
ယနေ့ အချိန်ထိ အရည်သွေးကောင်းတဲ့ metallic ဆေးအမျိုးအစား များစွာရှိသလို တွဲဖက်သုံးရသော clear coat အမျိုးစားလည်း များစွာရှိပါတယ် ။ clear coat (2K) ၊ clear coat (1K ) စသည်ဖြင့် မည်သည့် clear coat ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြေခံကတော့ တူတူပါပဲ ။
clear coat ဆိုတာ ပလက်စတစ် ဆေးရည် တမျိုးပါပဲ ။ clear coat ဆေးကို မှုတ်ရာတွင် ထို ပလက်စတစ်ဆေးရည် ကို လေနှင့် ဖိအားပေးပြီး အငွေ့ အဖြစ်ပြောင်း ကာ ၊ ကား body အပေါ် သို့ ကျရောက် စေပါတယ် ။ ထိုသို့ကျရောက်ပြီး ဆေးအမျိုးစားပေါ် မူတည်ပြီး ၈နာရီမှ နာရီ ၂၀ အကြာမှာ ထိုဆေးရည်ဟာ ပလက်စတစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားပါတယ် ။ ဒါကြောင့် clear coat အသုံးပြုထားတဲ့ ကားရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ တစ်ခြားဆေးတွေ အသုံးပြုထားတဲ့ ကားမျက်နှာပြင်ထက် တောက်ပမှု ပိုကောင်းတာ တွေ.ရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ပလက်စတစ်က ဆပ်ပြာရည်မှာပါရှိတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်နဲ့တွေ့ တဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆေးအရောင် တောက်ပမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ် ။ ဆပ်ပြာရည်မှာပါရှိတဲ့ အက်ဆစ် ဓာတ်များလေ ပျက်စီးမှုများလေပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ကားရေ ဆေးရာမှာ အက်ဆစ်ဓာတ်များတဲ့ ဆပ်ပြာ ရည်ကို သုံးမိမယ်ဆို၇င်တော့ မိမိကား ရဲ့ ဆေးအရောင် တောက်ပမှုကို အချိန်ကုန် ၊ ငွေကုန်ခံပြီး ဖျက်စီးသလို ဖြစ်နေမှာပါ ။
နောက်တစ်ခုက wiper Pump ထဲ ထည့်တဲ့ဆပ်ပြာရည်ပါ ။ ပြည်တွင်းမှာ wiper Pump ထဲကို တော်တော်များမျာ တော့ ရိုးရိုးရေပဲ ထည့်သုံးပင်မဲ့ model မြင့်ကားတွေမှာတော့ ဈေးကွက်မှာ ရောင်းတဲ့ wiper Pump ထဲ ထည့်သုံးရတဲ့ ဆပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြု တတ်ကြပါတယ် ။ ကားမောင်းနေ စဉ်အတွင်း ကားရှေ့ မှန်မှာ အမှုံတွေများလာရင် ဆေးတဲ့ ဆပ်ပြာရည်အနေနှင့် အသုံးပြုတာပါ ။ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် အသုံးပြုတာကြောင့်မို.လို. ထိုဆပ်ပြာရည်မှာ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်မှု နည်းသော်လည်း ရာသီဥတုအပှုရှိန်နှင့် ကားအင်ဂျင် အပူကြောင့် ဆပ်ပြာရည်ဟာ ကား bodyပေါ်မှာ ခြောက်သွားပြီး ကားဆေး ဖြစ်တဲ့ clear coat ပလက်စတစ်နဲ့တွေ.တဲ့အချိန်မှာ ထိုပလက်စတစ်ကို ပေါက်သွားအောင်း စားပစ်လိုက်ပါတယ် ။
မှုရင်း ရှိတဲ့ ဆေးအရောင် ပါ
ဆပ်ပြာရည် အစား ခံလိုက် ရင် ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံပါ
ကားရေဆေးတဲ့ နေရာမှာ အက်ဆစ်ဓာတ်ပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပြီး ရေများများ မဆေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ wiper Pump ထဲ မှ ဆပ်ပြာရည်ကြောင့် ဖြစ်စေ မိမိကား မှာ ဆပ်ပြာ ရည် ထိပြီး ခြောက်သွားပြီး ဆိုရင် မထမဦးဆုံး မိမိရဲ. ကားဆေးအရောင်မှာ အဖြူရောင် အကွက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရမှာပါ ။ ထိုအကွက်မှ တဆင့် အရင်ဆုံး အပေါက် သေးသေး လေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ် ။ ထိုအပေါက်ထဲကိုမှ အကြိမ်များစွာ ဆပ်ပြာရည် ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆေးပေါက်ခြင်းဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပါ ။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို.က မိမိရဲ.ကားကို ဒီလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလည်း …. ??????
ကားရေဆေးတဲ့ နေရာမှာ ကားရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ဆီမရှိဘူးဆိုရင် ရိုးရိုးရေနဲ့ ပဲ ဆေးတာ ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ် ။ မျက်နှာပြင်မှာ ဆီတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကားရေဆေးမို.အတွက် သီးသန့် ထုတ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာရည်ကို ပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ထို့ သို့ဆပ်ပြာရည် အသုံးပြုရာတွင် လည်း ရေများများနဲ့ကား bodyမှာ ရှိတဲ့ ရေခို နိုင်မည့် နေရာ ( ဥပမာ နောက်ကြည့် မှန် လို နေရာမျိုး ပေါ့ ….. ) ကို ရေများများနဲ. ဆေးပေးဖို. လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒါမှပဲ ဆပ်ပြာရည် မကျန်ခဲ့မှာပါ ။
နောက်တစ်ခုက wiper Pump ထဲကိုလည်း ရိုးရိုးရေပဲ ထည့်ပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ် ။ ဈေးကွက် ထဲမှာ wiper Pump မှာသုံးတဲ့ အရည်မျိုးစုံ ရှိပါတယ် ။ အက်ဆစ်မပါဘူးလို့ ရေးထားပေမဲ့ လက်တွေ. အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ထိုအရည်ကြောင့် ဆေးကွက်ထသွားတာမျိုး တွေ့ ဖူးပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးရေ ထည့်သုံးတာဟာ မိမိ ကားဆေးအရောင် ကြာရှည်ခံဖို.အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ … ။
၂။ ဌက်ချေးကြောင့် ပျက်စီးစေခြင်း
ဌက်ချေးကြောင့် ကားတစ်စီးရဲ့ ဆေးအရောင် ပျက်စီးမှုဟာ ဒုတိယ အများဆုံး တွေ.ရတဲ့ ဆေးအရောင် ပျက်စီး စေတဲ့ ကြောင်းရင်းပါပဲ ။ ဆပ်ပြာရည်လို ရှောင်ရှားဖို.လဲ အလွန်ခက်ပါတယ် ။ အများစုတော့ မိမိအိမ်ရဲ. ကားပါကင်မှာဖြစ်စေ ၊ သွားလာရင်း ကားပါကင်မှာ ဖြစ်စေ ဌက်ချေး ထိကြတာများပါတယ် ။
ဌက်ချေး ထိခြင်းကြောင့် ဆေးကွဲ သွားပုံ အဆင့်ဆင့်
မိမိကားမှာ ဌက်ချေး ထိပြီဆိုရင်တော့ ၂၄နာရီအတွင်း ကားကို ရေမဆေးပဲ ထားမယ်ဆိုရင် လက်တလောအနေနှင့် မိမိကား ဆေးအရောင်မှာ သိသိသာသာ အဖြူရောင် အကွက် ဖြစ်သွားပါတယ် … ။ နောက်ပိုင်း မှာ တော့ ရာသီဥတု အပူရှိန်ကြောင့် ထိုအဖြူကွက်မှ အစပြု ပြီး ဆေးကွဲခြင်းဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ် ။ အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာက ဆေးကွဲနေတဲ့ ကားတစ်စီး ကို ဆေးအသစ် ပြန်မှုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်သား ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်ပါစေ တစ်နှစ်ခွဲ ကြာတဲ့အချိန်မှာ ပြန်ပြီး ဆေးကွဲ တတ်ပြန်ပါတယ် … ။
ကားတစ်စီးမှာ ဆေးကွဲစေတဲ့ အကြောင်းအရာ နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ် ။ တစ်မျိုးက နှစ်တော်တော် ကြာနေတဲ့ကားပါ ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဌက်ချေးထိခံရတဲ့ ကားပေါ့ ။ ဒီလိုမျိုး ဆေးကွဲနေတဲ့ ကားတွေကို ဆေးပြန်မှုတ်တဲ့အခါ တချို့ က နှစ်တော်တော်ကြာလို့ဆေးကွဲ တဲ့ ကားဆိုရင် တစ်စီး လုံး မှုရင်းဆေးကို ခွာ ထုတ်ပစ် လိုက်ပါတယ် ။ body သံသားပေါ်တဲ့ အထိ ခွာပစ်ရတာပါ ။ ဌက်ချေး ထိတဲ့ ကားဆိုရင်တော့ ထိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဆေးခွာထုတ်ပြီး ဆေးအသစ်ပြန် မှုတ်ပါတယ် ။ ဆေးပြန်မကွဲအောင်လို့ ပါ … ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်အများကြီး ပေးရတာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့ သူတော့ရှားပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် ကျနော် တို့ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း ကြမလဲ …. ပေါ့ … ။
အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ဌက်ချေး မထိအောင် ထိန်းသိမ်းဖို.ဆိုတာတော့ တော်တော်ခက်တဲ့ အရာပါ ။ နေ.တိုင်းရပ်နေကျ ပါကင်မှာ နေ.တိုင်း ဌက်ချေးထိခံရတယ် ဆိုရင်တော့ နေရာပြောင်းထားပေး သင့်ပါတယ် ။ မိမိကားမှာ ဌက်ချေးထိပြီဆိုရင် ၂၄နာရီအတွင်း သတိထားပြီး ရေဆေးပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဌက်ချေးထိရင် သုံးဖို.အတွက် ဈေးကွက်မှာ ဆေးရည် မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ထိုဆေးရည်တွေကို သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ရေနဲ့ပြန်ဆေးပေးသင့်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ထို ဆေးရည်တွေကလည်း ဆပ်ပြာရည်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ … ။
ကယ် .... ဒီ နှစ်မျိုး ကတော့ ကားတစ်စီး ဆေးအရောင် ပျက်စီး စေတဲ့ အကြောင်းရာတွေ ထဲမှာ အဖြစ်များ ဆုံး ပါပဲ ။ တခြား ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်း ကို ဆက်လက်ရေး သွားပါမယ် ။
ဒီလောက် ဆို ကျနော် ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ မိမိ ကိုယ်ပိုင် ကားကို ဆေးအရောင် ထိန်းသိမ်း နိုင်လိမ့် မယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ... ။
ဓာတ်ပုံကို google မှ ရယူခဲ့ပါသည်
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:23 AM
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) March 1, 2012 at 8:18 AM
jasmine(တောင်ကြီး) March 1, 2012 at 11:02 AM
ခုဒီမှာတော့ ကားနဲ့တူတာ အရုပ်ကားတောင်မရှိသေးပါဘူးဟယ်
ချစ်စံအိမ် March 1, 2012 at 4:53 PM
မဒမ်ကိုး March 1, 2012 at 8:02 PM
Monmon Yoko March 4, 2012 at 12:38 AM
ဗဟုသုတ တော်တော်ရပါတယ်။ မှတ်သားသွားပါတယ်နော်။ နောက်ထပ် ပို.စ်လဲစောင်.ဖတ်နေမယ်နော်။
Monmon Yoko March 4, 2012 at 12:53 AM
AMK October 7, 2012 at 11:59 PM
သိပ်သဘောကျတာပဲ ဗျာ အိမ် ကကားတွေ ဒဲလို ဖြစ် ၇င် သိပ် ဟတ်ထိတယ်ဗျာ ကားရေဆေးပြီး ဆပ်ပြာမပြောင်လို့ ပေါ့နော်...အကွက်တွေဖြစ်လာရင် မြင်ရတာရင်မောစရာပါဗျာ မျှဝေတာကျေးဇူးပါဗျာ